ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းအား တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ ဧည့်အဖွဲ့တွေ့ဆုံ | Moep1's Blog
၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းအား တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ ဧည့်အဖွဲ့တွေ့ဆုံ
(နေပြည်တော် ဇန်န၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၀ခုနှစ်)
အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းအား တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ Union Resources & Engineering Co., Ltd. မှ Chairman Mr. Feng Ke နှင့်အဖွဲ့သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်၊ ၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာန နှင့်လုပ်ငန်းများမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံ Union Resources & Engineering Co., Ltd. မှ Vice Chairman Mr. Guan Yukun နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။
This entry was posted on Thursday, January 28th, 2010 at 3:48 pm and is filed under အထွေထွေ (General News).	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.